Home News Wararkii ugu Dambeeyay Ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu qarxiyay Gobolka Gedo
Sida ay sheegayaan Wararka ka imaanaya gobolka Gedo waxaa maanta qarax lala beegsaday ciidamo Itoobiyaan ah, oo halkaas ku sugan.
Qaraxa oo dhacay saaka aroortii hore ayaa lala beegsaday kolonyo ciidamo Itoobiyaan ah oo ka yimid dhanka degmada Dooloow kuwaas oo sahay ugelbinayey ciidamo kale oo ku sugan deegaanka Yurkut ee dhaca halka ay iska galaan gobollada Baay iyo Gedo.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in miino dhulka lagu aasay ay haleeshay gaari Uuraal ah ayna jirto khasaare gaaray ciidamada Itoobiyaan oo aan la ogeyn inta ay la egtahay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa qoraalo ay ku baahiyeen warbaahinta taageerta ku sheegtay in 40 askari oo Itoobiyaan ah ay dhimasho ama dhaawac yihiin.
Previous articleBoobka hantida qaranka oo faraha ka sii baxaya iyo MW. Farmajo oo dhagaha ka xirtay (Daawo Video)
Next articleWar Deg Deg ah:-Qarax goordhaw ka dhacay Wadadka Dabka
Madaxweyne ismaaciil Cumar Geelle iyo Farmaajo Maxeey ka wadahadleen!!
Faah Faahino Ka Soo Baxaya Shabakad Dhaqda Doolarka Madow Oo Ciidamada...